जहाँ माया हुँदैन, त्यहाँ आर्यन हुँदैन ! « News of Nepal
जहाँ माया हुँदैन, त्यहाँ आर्यन हुँदैन !
यक आर्यन सिग्देल बिहीबार लाजिम्पाटस्थित एक होटलको गार्डेनमा खुसी मुद्राका साथ मजाकको मुडमा भेटिए। खुसी हुनु पनि स्वाभाविक थियो, उनैको कथा, गीत लेखन, निर्माण तथा अभिनय रहेको फिल्म कायरा जो रिलिजको संघरमा छ।
साउन महिनालाई अधिकांश हिन्दू महिलाले मायाको महिना मान्ने र आफ्नो जन्मदिन श्रावण २० गते पर्ने तथा जन्मदिनका बेला ल्याएको फिल्मले राम्रो परिणाम दिने भएकाले त्यसैको छेको पारेर आगामी शुक्रबार १८ गते कायरा अल नेपाल रिलिज गर्न लागेको उनले खुसी मुद्रामा सुनाए। बिन्दास मुडमा पत्रकार भेटमा प्रस्तुत हुँदै फिल्मका विभिन्न अडियो भिडियो सामग्रीबाट राम्रो नतिजा पाएकाले परिणाम पनि राम्रो हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। आफ्नो निर्माणको तेस्रो फिल्म कायरा निर्माण गरिरहँदा जिम्मेवारी बढ्दै गएको आर्यनले बताए। फिल्म प्रेमकथामा आधारित रहेको र कायरा नामक पात्रको सोचाइ तथा उसैबाट कथा अगाडि बढेकाले नाम कायरा राखेको आर्यनले खुलाए। ‘मायामा रहेका कायरा र जयको प्रेम असफल भएपछि बिदेसिएको जयको एक विशेष व्यक्तिसँगको भेटसँगै कथाले नयाँ मोड लिन्छ। फिल्म कायरा र जयको लभ, रोमान्स र विछोडमा आधारित छु’, आर्यनले थोरै कथा पनि खुलाउँदै भने– ‘म राम्रो सिनेमा बनाउन खोज्ने मान्छे हो। सिनेमा बनाएर नायक हुन र आफूलाई हावी बनाउन खोज्ने मान्छे होइन। मैले सोचेको कायरा र जयको क्यारेक्टर आफैंले डेभलप गरेको भएर म जति इमोसनमा डुबेको थिएँ, त्यति त अरू डुब्न सक्दैनन्। त्यसैले म आफैं जयको भूमिकामा छु। फिल्मको सब्जेक्ट राम्रो हुनुपर्छ र छ। त्यसमा हामीले मेहनत गर्ने हो, बाँकी त दर्शकको कुरा हो।’
प्रायः फिल्ममा नायिका नम्रता श्रेष्ठसँग देखिएका आर्यनले कायरामा भने नायिका साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहसँग काम गरेका छन्। उनले मुख खोले– ‘निर्देशक लक्ष्मण (रिजाल) साम्राज्ञीलाई लिन चाहिरहेका थिए। फिल्मको सब्जेक्ट बनेपछि त्यसमा साम्राज्ञी चाहिने फिल भयो। हाम्रो पियर राम्रो भएको छ। हालसम्म रिलिज भएका ट्रेलर र गीतमा दर्शकको प्रतिक्रिया हेर्दा धेरै दर्शकले हाम्रो पियर मन पराइदिएका छन्। पियर मन पराइएन भने स्टोरीको डेप्थमा जानै सकिँदैन।’ आर्यनले अगाडि सुनाए– ‘साम्राज्ञीको सबै फिल्म हेरेको छु, अहिलेसम्म उसले अप्रोच गरिरहेको भन्दा अपोजिट भूमिका कायरामा छ। कथा लेख्दै जाँदा त्यहाँ साम्राज्ञीलाई देख्दै गएँ, त्यस कारण उसलाई लिएको हो। मैले प्रायःजसो नम्रतासँग फिल्म गरिरहेको भए पनि दर्शकलाई फ्रेस कुरा दिनुपर्छ भनेर पनि उसलाई लिएको हो।’
कायराबारे आर्यनको कथन थियो– ‘फिल्म राम्रो हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु। भोलि मेरो फिल्मलाई २ जनाले मात्र राम्रँे भनिदिए पनि म फिल्म नै बनाउँछु। किनभने मैले जानेको कलाकारिता नै हो।’ चकलेटी हिरोका रूपमा चिनिएका उनले बीचमा एक्सन फिल्म गरे पनि दर्शकले नरुचाएकाले फेरि प्रेमकथामा आधारित फिल्ममा फर्केको स्वीकारे। ‘अब जहाँ माया हुँदैन, त्यहाँ आर्यन हुँदैन।’ –उनले भने।
फिल्मको एउटा गीत आफैंले लेखेका आर्यन गीत लेख्नुभन्दा अभिनय गर्न सजिलो रहेको बताउँछन्। ‘स्क्रिफ्ट लेख्दालेख्दै त्यहीअनुसारको गीत भए हुन्थ्यो भन्ने सोच्दै थिएँ। राति उठेर पनि यस्तो गीत भए हुन्थ्यो भनेर शब्दहरू लेख्थें, २ प्याराग्राफ लेखेपछि डाइरेक्टरलाई गीत कसले लेख्ने हो, यत्तिको त हुनुपर्छ बढी साहित्यिक भयो भने पनि पब्लिकले बुझ्दैनन् भन्दा यही नै हुन्छ भनेपछि कोशिस क्षत्रीलाई संगीत गर्न दिएँ। कोशिसले राम्रो कम्पोज गरेको छ।’ –गीत लेखनबारे प्रस्ट्याउँदै आर्यनले भने।
नायिका साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहले आफूलाई अधिकांशले फेरि पनि साम्राज्ञी नयाँ हिरोसँग मात्र काम गर्छ होला भन्ने सोचिरहेका बेला त्यसको विपरीत आफूले भने आर्यनसँग काम गरेको बताइन्। ‘मलाई मानिसहरूले प्रदीप खड्कासँग काम गर्छ होला भनिरहेका थिए। तर, आर्यन दादासँग काम गर्ने कुरा भयो। मानिसहरूले किन आर्यनसँग भन्ने गर्थे। तर, उहाँजस्तो एक्टरसँग काम गर्न पाउनु मेरो लागि राम्रो अपरच्युनिटी थियो’, साम्राज्ञीले सुनाइन्– ‘म अरू फिल्ममा काम गर्दा कतिपय अवस्थामा हिरोलाई मैले एक्टिङ सिकाउनु पथ्र्यो। तर, उहाँसँग काम गर्दा मलाई कति कुरा थाहा रहेनछ भन्ने बुझ्न पाएँ। दादाले मलाई धेरै कुरा सिकाउनुभयो। चाहे इमोसन होस् या अदा। कति कुरा मलाई थाहै रहेनछ। हुन त मलाई म्याचुअर्ड र गरिरहेको भन्दा फरक खालको अभिनय भएका कारण कतिपय ठाउँमा गाह्रो भयो तर पनि मलाई दादाले धेरै सहयोग गर्नुभयो। मलाई यो फिल्म गर्दा रिस्क पनि हुन सक्थ्यो। तर, रिस्क लिन पनि सक्नुपर्छ, के थाहा भोलि यसले नै पो राम्रो हुन्छ कि।’
लक्ष्मण रिजालले निर्देशन गरेका फिल्म आर्यनकै होम प्रोडक्सन आर्यन सिग्देल इन्टरटेन्मेन्ट र आर एन्ड आर प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको हो। आर्यन र साम्राज्ञीको साथमा फिल्ममा शिशिर राणा, हितेश शर्मा, सुरेश न्यौपाने, मरिषा श्रेष्ठलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। केदार भुसालको पटकथा तथा संवाद रहेको फिल्ममा कोशिस क्षत्री, अर्जुन पोखरेल र कल्याण सिंहको संगीत, प्रवीण सिंहको कोरियोग्राफी, शिवराम श्रेष्ठको छायांकन, बनिष शाह र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। फिल्मको छायांकन फिलिपिन्समा गरिएको हो।
आऊ न माया सार्वजनिक